နှစ် သစ် မှာ ပြိုင် ကဲ မယ် … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » နှစ် သစ် မှာ ပြိုင် ကဲ မယ် …
နှစ် သစ် မှာ ပြိုင် ကဲ မယ် …
Posted by The Reds on Dec 31, 2010 in Creative Writing | 10 comments
မ ကြာ ခင် အ ချိန် အ တွင်း မှာ ပဲ နှစ် သစ် ကို ရောက် ရှိ တော. မှာ ပါ … နှစ် သစ် ရောက် ပြီး ဆို တာ နဲ. မြန် မာ နိုင် ငံ က လူ ငယ် တွေ လူ လတ် ပိုင်း တွေ အ ပြိုင် ကဲ ကြ တော. မှာ ပါ … ကဲ ပြီး ရင် တော. ကွဲ ကြ တော. မယ် ကွဲ ပြီး ရင် တော. ပြဲ ကြ တော. မှာ ပါ .. အဲ လို ပြဲ ပြီး ရင် တော. ကျွန် တော် တို. မ ဟာ ရန် ကုန် ကြီး ရဲ. ပြည် လမ်း မ ပေါ် မှာ ကား လေး တွေ ဂျွမ်း ထိုး နေ တဲ. ပြ ကွက် တွေ ကို နှစ် သစ် မှာ ပဲ တွေ ကြ ရ တော. မှာ ဖြစ် လို ရန် ကုန် မြို. က members တွေ အ တူ တူ ကြည်. ရ အောင် နှစ် သစ် ရဲ. မ နက် ခင်း မှာ အ ပျင်း ပြေ လမ်း လျှောက် ရင်း ထွက် ခဲ. ကြ ပါ လို. ဖိတ် ကြား အပ် ပါ တယ် ဗျာ .. နှစ် သစ် မှာ အား လုးံ ပဲ ကံ ကောင်း ခြင်း ၊ ပျော် ရွှင် ခြင်း ၊ လွပ် လပ် ခြင်း ၊ connection ကောင်း ခြင်း မှား နဲ. ကြုံ ကြိုက် ကြ ပါ စေ ။
ဟုတ် တယ် ဗျာ အ ရင် နှစ် တွေ က တော. ဒီ အ တိုင်း ကြီး ပဲ ..
မြန်မာတွေလည်း အားရပါးရ ပျော်ကြစေချင်တာပါပဲ..။
ပျော်ကြပါ၊ သုံးကြပါ၊ ငွေတွေလည်ပါတ်စေပါ..။ သူဌေးသားတွေ. .ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသားတွေလည်း ..အဖေရှာထားသမျှ.. အကုန်သုံးပစ်ပါ..။ သောက်ပါ.။စားပါ.။ ဟိုတယ်၁ခုလုံးမက.. ပင်လယ်ကမ်းခြေတခုလုံးငှားပြီးပျော်ပါ…။ ငွေတွေ အလှူပေးသလို.. ပေးပစ်ပါ။ မြန်မာပြည်ထဲမှာပဲ.. ငွေတွေသုံးပါ။ ဒေါ်လာတွေ.. ယူရိုငွေတွေ ကိုင်သုံးပါ။ အပြိုင်သုံးကြပါ။
ပြီးရင် .သုံးထားသမျှ ပြန်ရှာရမှာ .. လူ့သဘာဝပဲမဟုတ်လား..။
ပြန်ရှာပါ…။ အဖေ့ဘဏ်စာရင်းကယူပါ။ အိပ်ထဲကနှိုက်ပါ။
သာမန်လူတန်းစားတွေအတွက် … ဒီလိုနဲ့. .ပိုကောင်းတဲ့ နှစ်ကူးရက်တွေဖြစ်လာမှာပါ..။
Yes, Every new year Like that……….. espically for သူဌေးသားတွေ. .ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသားတွေ
not all MG memember………… we are clever ………. Right!
yea ! Right … We are so clever ;)
အဲဒိလို သုံး ဖြုန်းစရာ
ဩော် ကောင်းလှောင့်တေး ကောင်းလှောင့်တေး……….
မြိုထဲမှာ ဆယ့်နှစ်နာရီတိတိကို မီးရူးမီးပန်း ငါးချက်လောက်လွှတ်ဖောက်လိုက်တာ ရဲလိုက်ဖမ်းလို့ ကောင်လေးတွေပြေးကြတာ မြင်ရသေးတယ် ။ ဒီနှစ်အစောင့်ကြပ်အရမ်းများတယ် ။ တရုတ်တန်းက ဆိုင်တွေကိုလည်း အစောကြီးပိတ်ခိုင်းတယ် ။ ကလပ်တွေကတော့ သာမန်ထက်ဈေးပိုတတ်တယ်လို့ သိရတယ် ။ ယောကျာ်းလေးဆိုရင် တစ်သောင်းခွဲနဲ့ မိန်းကလေးဆိုရင် ခုနှစ်ထောင်လို့ပြောတာပဲ ဒါတောင် ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတယ်တဲ့ ။ ကန်တော်ကြီးမှာလည်း စည်ကားတယ်တဲ့။ နောက်တစ်နေ့ရတဲ့သတင်းကတော့ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ ရောက်လာတဲ့အလောင်းတွေ အရင်နေ့က ထက်ပိုများတယ်ဆိုတာပါပဲ ။
အ လောင်း တွေ က တ နှစ် ထက် တ နှစ် စံ ချိန် တင် အောင် တိုး နေ တော. တာ ပါ ပဲ ..